Dalila - Wikipedia
I Dalila dia vehivavy resahina ao amin'ny Baiboly izay isan'ireo vehivavy nampitondra faisana ny Zanak'i Israely noho izy nasain'ny fahavalon'i Israely, ny Filistina, hamantara ny tsiambaratelon'ny herin'i Samsona izay niraiki-pitia taminy. Ao amin'ny Bokin'ny Mpitsara toko faha-16 no ahitana ny fitantarana ny amin'i Samsona sy i Dalila.
Mampatory an'i Samsona eo amin'ny lohaliny i Dalila, sary nataon'i Alexandre Cabanel (taona 1878)
Ny anaran'i DalilaModifier
Atao hoe דְּלִילָה / Delilah io anarana io amin'ny teny hebreo ka midika hoe "mpitari-dalana", fa amin'ny teny arabo kosa dia دلیله / Dalilah izay midika hoe "jejojejo". Amin'ny teny grika izy dia atao hoe Δαλιδά / Dalida.
Ny fitantarana ao amin'ny BaibolyModifier
Tao amin'ny lohasahan'i Soreka no nahitan'i Samsona an'i Dalila izay naharaiki-pitia azy. Ny andrianan'ny Filistina fahavalon'i Israely dia nampanantena sekely volafotsy zato sy arivo an'i Dalila raha hitany ny tsiambaratelon'ny hery lehibe nananan'i Samsona. Intelo i Dalila no nangataka tamin'i Samsona ny mba hahalala ilay tsiambaratelo tamin'i Samsona izay nadainga taminy hatranihatrany. Tamin'ny faninefany dia nambaran'i Samsona azy ilay tsiambaratelon'ny heriny izay mitoetra ao amin'ny volony tsy notapahina hatramin'ny fahaterahany noho izy natokana ho nazira ho an'Andriamanitra.
Noharatan'i Dalila ny lohan'i Samsona, sary nataon'i Caravaggio, taonjato faha-17.
Namadika an'i Samsona amin'izay i Dalila ka naniraka tany amin'ireo andriandahy filistina mba hilaza amin'izy ireo fa efa fantany ny tsiambaratelon'ny herin'i Samsona. Nomen'izy ireo an'i Dalila amin'izay ireo vola nampanantenaina. Nampatorin'i Dalila teo amin'ny lohaliny i Samsona avy eo notapahiny ireo tokom-bolony fito voarandrana. Niala tamin'i Samsona amin'izay ny heriny sy ny fanampian' Andriamanitra azy. Tonga ny Filistina ka nisambotra azy sy nanapotsitra ny masony roa ary nanipy azy tao an-tranomaizina tany Gaza.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Dalila&oldid=971234"
Dernière modification le 8 Jiona 2019, à 14:38
Voaova farany tamin'ny 8 Jiona 2019 amin'ny 14:38 ity pejy ity.